Forum serasera malagasy fiainana - Dinika forum.serasera.org
Lohahevitra : Fiaraha-monina
Fitohizan'ny hafatra : fiainana
zo.miarintsoa - 12/12/2015 13:58
salam daol o!
Ten manairan marina zan we miaina zan, ref mb met kel ny fiainanao de halan mpirai-monina ianw, tsis resak afa ts ny fanaratsian anao no resahandry zareo, ef mila ts ho tamana eo an-tanàna mints enao, tena manairan marn ny miaina ra ol a!
stahtam - 14/12/2015 10:21
Io dia anisan'ny zavatra mba efa nodinihiko koa taloha fa izao no mba valiny takatro:
Toetrantsika Malagasy nefa tena tsy zakantsika raha ny hafa no "manao tsindrio fa lavo" na "manao kely tsy mba mamindro" na "manao vain-drahalahy tsy mba marary", izany hoe "manao abus de pouvoir". Noho io antony io dia teraka ho azy indray ny toetra "manao ory hava-manana" araka io nolazainao fa mihatra aminao io. Ka asa raha mahavaly ny fanontanianao izay famakafakana tsotsotra izay. Anjaranao izany ny mandinika ny fihetsikao @ mpiara-monina
vahiny2004 - 28/01/2016 16:07
Sao dia mba ny saina fotsiny no manao sinema e .
Positiver-o foana fa inona ary no ivakiana loha @ hafa fa ny ataon'ny tena jerena tsara sy atao tsara dia basta . Sao lany andro sy énergie mamisavisa ity rehetra ity , ny fotoana mandroso ihany
andrywui - 04/02/2016 10:29
Ny Malagasy ihany no manana io foto pisainna ratsy de ratsy io eto ambonin'ny tany ORY HAVA MANANA
260882 - 11/05/2016 00:46
Ny ahy ndray otrany rano mandalo andamosin-gana io. Tsy dia asiko sira loatra, tohizo zay mampamety ny fianana ry zareo. Aleo izy varina handinika ny fiananao ka tafavela hafara ao. Tsy asina commentaire akory.
Aza atao mankarary fo fa io tadidio na mety na tsy mety ny ataonao lay karazan'olona mahita lazaina hilaza zavatra foana
Page rendered in 0.0861 seconds